ZaseHimalaya iyintaba ephakeme kunazo zonke e iketango emhlabeni. Bona imiswe phakathi neminyaka ukushayisana yezwekazi laseNdiya. Beka emhlabeni lapho zaseHimalaya - liwumngcele esisenyakatho yeNdiya, Pakistan, Bhutan, Nepal futhi eBurma. inqubo Tectonic ukwakha lezi zintaba uyaqhubeka. Namanje siye abasinda ekuzamazameni komhlaba ezibangele drift kancane kancane ezwekazini laseNdiya enyakatho.
Himalaya uhlelo - cishe 240 km ubude, ububanzi - kusuka 240 kuya 330 km. Siqukethe amabanga amathathu, okuyinto zitholakala ngokulinganisa: Elikhulu zaseHimalaya, Lesser zaseHimalaya nezase Predgimalai.
"Goddess - Umama ka snows"
Lokhu ibinzana Nepali kuzwakala "Mount Everest" futhi imele entabeni ephakeme kunazo zonke emhlabeni, esemgwaqweni zaseHimalaya. BaseYurophu Ngibaniké kona igama layo - Everest ngemva Mnumzane George Everest, uColonel, Jikelele Surveyor yeNdiya. Kodwa hhayi kuphela kule ntaba kuwufanele ukunakwa. Lapha esabekayo yelula yeqhwa omude kunayo yonke, okuyinto Itholakala Karakorum, ubude - 76 km. Futhi emthambekeni emibi emhlabeni has a Rakaposhi entabeni, ukuphakama 7788 metres ubude entabeni emthambekeni -. 10 km. On emthambekeni eseningizimu kweNtaba Annapurna (8091 m kokuwa) kuyinto kuyanda inani eliphakeme kunawo wonke ubude 4482 m.
Ngiyavuma, kuyinto enye ukwazi lapho zaseHimalaya, nokuningi - vakashela lezi zindawo. Kodwa kanjani lapho? Lapha abahambi ukusiza izinkambo eminingi eyakha izintaba zaseHimalaya. Uzokwazi ukuvakashela amazwe ezifana Nepal, India, Bhutan, Tibet. Uhambo lwakho kuyoba abangasoze balukhohlwa okuthakazelisayo ukubona indawo izinkambo, waya endaweni engcwele, noma kungaba ukuvakasha yoga. It unikeza kokubili iqembu kanye izinkambo ngabanye, okuthakazelisayo Trekking uhambo ukuze zaseHimalaya ezahlukene izigaba eyinkimbinkimbi.
Ukuphi zaseHimalaya - emhlabeni siyamangalisa. Uhambo ngalunye - into engavamile. Ngokukhethekile kufanele kube inkolo India, futhi, kungakhathaliseki siyaqonda noma cha, emathempelini emaphethelweni lasendulo bewathanda njalo, ngifuna ukufunda ngazo ngangokunokwenzeka. Ukuvakashela zaseHimalaya, ungakwazi ukuhlola izici India ngisho eNingizimu Asia iyonke. Kuningi zezihambeli ziyafika lapha ukufunda I-Ayurveda, umkhuba yoga. Bona zihlele izinkambo eziya amathempeli lasendulo, izindela zesilisa nokuhlala zonke ngoba, okokuqala kunakho konke, lapha uphumule umphefumulo. Futhi-ke izinzuzo eziningi esazamukela futhi umzimba.
Nepal - umbuso ka entabeni iphakama
Kwelinye izwe lapho zaseHimalaya - Nepal. Itholakala ohlangothini lwaseningizimu sentaba. Kuyinto isikhungo emhlabeni entabeni ezokuvakasha. Lapha, emangalisa kakhulu amakilasi - entabeni izintaba, kanye raftint. Futhi lokhu akumangalisi, ngoba i-Mount Everest - le intaba ephakeme e zaseHimalaya - ilapha eNepal. Tours ETIBET zitholakala kuphela ehlobo. Ebusika, iyizwe iqhwa.
Surfing zaseHimalaya njalo elihlobene ne zemfihlakalo, kukhona okuthile ekuseni. Uzizwa ke uma uvakasha Mount Kailash - maphakathi nezwe. Noma lapho uzindla esigodlweni, noma belashwa e Dharamsala. Kulezi zindawo ungakwazi nihamba endleleni, okuyinto liseduze kakhulu esibhakabhakeni. Mhlawumbe yingakho onqenqemeni, lapho Himalaya, uvumela umuntu ukuba uphumule umzimba nomphefumulo, ukuze ujabulele impilo elokuthula abuyele ekhaya ngiqabulekile ngokugcwele.
Igama Vasilisa usuku ikhalenda isonto
Kobuso imaski igolide: i Uhlolojikelele, izici zohlelo lokusebenza, libuyekeza ukusebenza kwe
Nginx: Isethaphu futhi ukufakwa
Lake umema Kumkul. Nezokungcebeleka isikhungo - ukukhetha